Kɔ Do Da Ɔdɔ A No Mu Yɛ Dzen Edzi | Ɔweɔn-Aban Adzesua
Ɔweɔn-Aban—Dza Adzesua Nsɛm Wɔ Mu | January 2021
KENKAN WƆ Abua Acholi Afrikaans Aja Akha Albanian Altai Alur America Mmum Kasa Amharic Amis Arabic Argentina Mmum Kasa Armenian Armenian (West) Assamese Aukan Australia Mmum Kasa Aymara Azerbaijani Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Biak Bicol Bislama Bolivia Mmum Kasa Boulou Brazil Mmum Kasa Britain Mmum Kasa Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Chavacano Chichewa Chiga Chile Mmum Kasa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Mmum Kasa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuukese Cibemba Cinamwanga Cinyanja Colombia Mmum Kasa Croatian Cuba Mmum Kasa Czech Damara Dangme Danish Digor Douala Drehu Dutch Ecuador Mmum Kasa Edo Efik El Salvador Mmum Kasa English (Borɔfo) Esan Estonian Ewe (Awona) Fijian Finland Mmum Kasa Finnish Fon French French Mmum Kasa Ga (Nkran Kasa) Garifuna Georgian German German Mmum Kasa Gitonga Gokana Greek Greenlandic Guadeloupean Creole Guarani Guatemala Mmum Kasa Guianese Creole Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Havu Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Honduras Mmum Kasa Hungarian Hungary Mmum Kasa Hunsrik Iban Ibanag Ibinda Icelandic Idoma Igbo Igede Iloko Indonesian Isoko Italian Italy Mmum Kasa Japanese Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kirundi Kisi Kisonge Kituba Kongo Konkani (Roman) Korea Mmum Kasa Korean Krio Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Laotian Lari Latvian Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lolo Lomwe Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Madagascar Mmum Kasa Makhuwa-Meetto Malagasy Malawi Mmum Kasa Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Manyawa Mapudungun Marathi Marshallese Mashi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mexico Mmum Kasa Mfantse Min Nan (Taiwan) Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Niuean Norwegian Nsenga Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Palauan Panama Mmum Kasa Pangasinan Papiamento (Curaçao) Paraguay Mmum Kasa Persian Peru Mmum Kasa Philippines Mmum Kasa Phimbi Pidgin (West Africa) Poland Mmum Kasa Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quebec Mmum Kasa Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quechua (Huallaga Huánuco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romania Mmum Kasa Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Romania) Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Ronga Runyankore Russia Mmum Kasa Russian Rutoro Samoan Sangir Sango Saramaccan Sena Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovakia Mmum Kasa Slovenian Solomon Islands Pidgin Songomeno South Africa Mmum Kasa Spanish Spanish Mmum Kasa Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Sweden Mmum Kasa Swedish Tagalog Tahitian Taiwan Mmum Kasa Tajiki Talian Tamil Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Tewe Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Arabic) Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Venezuela Mmum Kasa Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yapese Yoruba (Alata) Zambia Mmum Kasa Zande Zapotec (Isthmus) Zimbabwe Mmum Kasa Zulu
ADZESUA ASƐM 4
Kɔ Do Da Ɔdɔ A No Mu Yɛ Dzen Edzi
“Enuadɔ mu a, hom ndodɔ homho yie nkorkor.”—ROM. 12:10.
NDWOM 109 Hom Mfa Hom Akoma Nyina Ndɔ Enuanom
DZA YERUBOSUSU HO *
1. Ndɛ, ebɛnadze na ɔma yehu dɛ ɔdɔ nnyi mbusua ntamu?
BIBLE no kãe too hɔ dɛ, wɔ nda a odzi ekyir no mu no, nyimpa bɛyɛ “hɔn a wonnyi dɔ.” (2 Tim. 3:1, 3) Ndɛ yehu dɛ dɛm nkɔnhyɛ yi enya ne mbamu. Dɛ nhwɛdo no, awargyaa ama mbusua ɔpepem pii mu apaapaa, iyi ma awofo no bo fuw hɔnho na mbofra no so tse nka dɛ wɔnndɔ hɔn. Obotum mpo aba dɛ, mbusua bi wɔ hɔ a wɔtse fie kor mu naaso ebɔhwɛ no nna wɔtse dɛ ahɔho. Obi a otu mbusua fo kãa dɛ, “Ebɔhwɛ no nna maame, papa nye mbofra no ntamu atsetsew, na obiara tsena no kɔmpiwta, ne tablɛt, no fon anaa video game ho. Ɔwɔ mu dɛ dɛm mbusua yi tse fie kor mu dze naaso wonnyim hɔnho yie.”
2-3. (a) Dɛ mbrɛ wɔakã ho asɛm wɔ Romefo 12:10 no, woananom na ɔsɛ dɛ yɛda ɔdɔ edzi kyerɛ hɔn? (b) Ebɛnadze na yebosusu ho wɔ adzesua yi mu?
2 Yɛmmpɛ dɛ nyimpa a wonnyi dɔ a wɔwɔ wiadze no mu no nya hɛn do nkantando. (Rom. 12:2) Mbom no, no ho hia dɛ yɛda ɔdɔ soronko bi edzi kyerɛ hɛn ebusuafo nye hɛn nuanom a yɛnye hɔn wɔ asafo no mu so. (Kenkan Romefo 12:10.) Ebɛn ɔdɔ na yɛrekã ho asɛm yi? Ɔyɛ ɔdɔ a ebusuafo a wɔbɛn hɔnho paara no da no edzi kyerɛ hɔnho no. Dɛm ɔdɔ yi na ɔsɛ dɛ yɛda no edzi kyerɛ hɛn sunsum afamu ebusua no, kyerɛ, hɛn nuanom Christianfo no. Sɛ yɛda dɛm ɔdɔ yi edzi a, yɛboa ma koryɛ tsena hɛn ntamu, na dɛm koryɛ yi ho hia papaapa ma nokwar som aakɔ do.​—Mic. 2:12.
3 Hom mma yɛnhwɛ dza yebotum esũa efi Bible mu nhwɛdo ahorow bi mu, na iyi bɔboa hɛn ma yeenya ɔdɔ a ɔtse dɛm na yaada no edzi.
JEHOVAH “N’ADƆYƐ SÕ”
4. Ebɛn kwan do na Joel 2:13 boa hɛn ma yehu mbrɛ Jehovah si dɔ hɛn fa?
4 Bible no ma yehu dɛ Jehovah wɔ su ahorow a ɔyɛ ahomka. Dɛ nhwɛdo no, ɔkã dɛ “Nyankopɔn nye dɔ.” (1 John 4:8) No su a ɔtse dɛm no nkotsee mpo twe hɛn bɛn no. Naaso Bible no san kã dɛ, Jehovah “n’adɔyɛ sõ,” kyerɛ dɛ, no dɔ no kɔ ekyir. (Kenkan Joel 2:13.) Iyi yɛ nsɛm a ɔka akoma a ɔma yehu mbrɛ Jehovah si dɔ hɛn fa!
5. Ebɛn kwan do na Jehovah da ehumbɔbɔr edzi, na yebesi dɛn esũasua no?
5 Hyɛ no nsew dɛ, aber a Joel 2:13 rekã Jehovah n’adɔyɛ ho asɛm no, ɔkãa no su fofor bi so a ɔma yetum bɛn no ho asɛm​—no mbɔbɔrhu. (Ex. 34:6) Ɔkwan kor a Jehovah fa do da ehumbɔbɔr edzi kyerɛ hɛn nye hɛn mfomdo a ɔdze kyɛ hɛn. (Ndw. 51:1) Wɔ Bible no mu no, ehumbɔbɔr kɔ ekyir kyɛn obi a ɔafom hɛn a yɛdze no bɔn bɛkyɛ no kɛkɛ. Ehumbɔbɔr yɛ atsenka a no mu yɛ dzen a obi nya ber a ohu dɛ obi fofor ruhu amandze no, na dɛm atsenka yi ka no ma ɔbɔ mbɔdzen dɛ ɔbɛyɛ biribi aboa nyia oruhu amandze no. Jehovah kã ɔpɛ a no mu dzen a ɔwɔ dɛ ɔbɔboa hɛn no ho asɛm dɛ ɔkyɛn atsenka a maame bi wɔ ma ne ba. (Isa. 49:15) Sɛ yɛkɔ ahohia mu a, ehumbɔbɔr a Jehovah wɔ no ka no ma ɔboa hɛn. (Ndw. 37:39; 1 Cor. 10:13) Yebotum ada ehumbɔbɔr edzi akyerɛ hɛn nuanom dze nam hɔn mfom a yɛdze bɛkyɛ hɔn na yeekwetsir dɛ yɛdze hɔnho ebufuw bɛhyɛ hɛn mu ber a wɔafom hɛn no do. (Eph. 4:32) Naaso, ɔkwan tsitsir a yebotum ada ehumbɔbɔr edzi akyerɛ hɛn nuanom nye dɛ, yɛbɔboa hɔn ber a worihyia nsɛndzendzen no. Sɛ ɔdɔ ka hɛn ma yɛda ehumbɔbɔr edzi kyerɛ afofor a, nna yerusũasua Jehovah a ɔyɛ ɔdɔ ho nhwɛdo a ɔsen biara no.​—Eph. 5:1.
“JONATHAN NE KRA TAKYEER DAVID NE KRA HO”
6. Ebɛn kwan do na Jonathan na David daa ɔdɔ edzi kyerɛɛ hɔnho?
6 Sɛ ehwɛ Bible no mu a, ibohu dɛ nyimpa ahorow bi a wonndzi mũ daa ɔdɔ a no mu yɛ dzen edzi kyerɛɛ hɔnho. Hom mma yensusu Jonathan na David hɔn nhwɛdo no ho nhwɛ. Bible no kã dɛ: “Jonathan ne kra takyeer David ne kra ho, na Jonathan dɔɔ no dɛ noara ne kra.” (1 Sam. 18:1) Wɔseraa David dɛ nna ɔno na obedzi Saul n’adze dɛ ɔhen. Iyi ekyir no, Saul faa David noho ebufuw na ɔbɔɔ mbɔdzen dɛ oboku no. Naaso, Saul ne babanyin Jonathan anntaa ne papa n’ekyir wɔ pɔw a ɔbɔɔ dɛ oboku David no ho. Jonathan na David hyehyɛɛ hɔnho bɔ dɛ wɔbɔkɔ do ayɛ anyɛnkofo na wɔaaboaboa hɔnho aber biara.​—1 Sam. 20:42.
Ɔwɔ mu dɛ nna Jonathan enyin sen David mfe pii dze, naaso wɔamma iyi ennsiw hɔn kwan dɛ wɔbɛda ɔdɔ a no mu yɛ dzen edzi akyerɛ hɔnho (Hwɛ nkyekyɛmu 6-9)
7. Ebɛnadze na nkyɛ obotum esiw Jonathan na David hɔn anyɛnkofa no kwan?
7 Ɔdɔ kɛse a nna ɔda Jonathan na David hɔn ntamu no yɛ nwanwa paara, osiandɛ nkyɛ ndzɛmba pii na obotum esiw hɔn anyɛnkofa no kwan. Dɛ nhwɛdo no, nna Jonathan enyin sen David bɛyɛ mfe 30. Nkyɛ Jonathan botum akã dɛ David suar na onnyi suahu ahen biara wɔ n’asetsena mu ntsi orunntum mmfa no nyɛnko ma ɔnnyɛ yie. Naaso, Jonathan ennya adwen a ɔtse dɛm wɔ David ho, mbom no nna ɔwɔ obu kɛse ma no.
8. Ehwɛ a, nna ebɛnadze ntsi na Jonathan yɛ David ne nyɛnko pa?
8 Nkyɛ Jonathan n’enyi botum aber David. Dɛ Ɔhen Saul ne ba no, nkyɛ Jonathan botum akã dɛ kyenkyen ara a ɔno na ɔsɛ dɛ ɔyɛ ɔhen a odzi hɔ. (1 Sam. 20:31) Naaso nna Jonathan brɛ noho adze, na odzi Jehovah nokwar. Dɛm ntsi, aber a Jehovah paaw David dɛ ɔno na ɔbɛyɛ ɔhen a odzi hɔ no, Jonathan fii n’akoma mu gyee too mu. Jonathan dzii David so nokwar, ɔmmfa ho dɛ iyi maa Saul no bo fuuw no no.​—1 Sam. 20:32-34.
9. Nna Jonathan n’enyi ber David anaa? Kyerɛkyerɛ mu.
9 Nna Jonathan wɔ ɔdɔ a no mu yɛ dzen ma David ntsi ɔamma n’enyi ammber no. Nna Jonathan yɛ egyentonyi a noho akokwaa nye ɔkofo kokodurnyi. Nna wonyim Jonathan nye n’egya Saul dɛ nkorɔfo a hɔnho yɛ “har sen nkɔr” na hɔnho yɛ “dzen sen ngyata.” (2 Sam. 1:22, 23) Dɛm ntsi, nkyɛ Jonathan botum dze ndzɛmba a ofii akokodur mu yɛe no etuw noho. Naaso, Jonathan annyɛ n’adwen dɛ ɔnye David besi akan na ɔammfa noho ebufuw so. Mbom no, nna Jonathan pɛ David n’asɛm osian akokodur a ɔdaa no edzi nye noho a ɔdze too Jehovah do ntsi. Nokwasɛm nye dɛ, ɔyɛ aber a David kum Goliath no ekyir na Jonathan bɔdɔɔ David dɛ nankasa noho. Yebesi dɛn ada ɔdɔ a no mu yɛ dzen dɛm edzi akyerɛ hɛn nuanom?
YEBESI DƐN ADA ƆDƆ A NO MU YƐ DZEN EDZI NDƐ?
10. Dɛ ‘yebefi hɛn akoma mu adodɔ hɛnho ɔdzen mu ara’ no kyerɛ dɛn?
10 Bible no kã kyerɛ hɛn dɛ ‘yemfi akoma mu ndodɔ hɛnho ɔdzen mu ara.’ (1 Pet. 1:22) Jehovah ayɛ ho nhwɛdo ama hɛn. Ɔdɔ a ɔwɔ ma hɛn no, no mu yɛ dzen araa ma sɛ yedzi no nokwar a, biribiara nnyi hɔ a obotum atsetsew hɛn ntamu. (Rom. 8:38, 39) Greek kasafua a wɔkyerɛɛ ase “ɔdzen mu ara” no, dza ɔkyerɛ nye dɛ yebemia hɛnho ayɛ biribi. Ɔtɔfabi a, no ho hia dɛ yemia hɛnho ama yeetum ada ɔdɔ edzi akyerɛ hɛn nua Christiannyi bi. Sɛ afofor hyɛ hɛn ebufuw a, ɔsɛ dɛ yɛkɔ do ‘kurakura hɛnho nkorkor wɔ dɔ mu, na yɛbɔ mbɔdzen kura sunsum koryɛ mu wɔ asomdwee homa mu.’ (Eph. 4:1-3) Sɛ yɛbɔ mbɔdzen kura “asomdwee homa” no mu a, yɛremmfa hɛn adwen nnsi hɛn nuanom hɔn mfom do. Mbom no, yɛbɔbɔ mbɔdzen ayɛ dza yebotum biara ebu hɛn nuanom dɛ mbrɛ Jehovah bu hɔn no.​—1 Sam. 16:7; Ndw. 130:3.
Wotuu Euodia na Syntyche fo dɛ wonnya adwen kor. Naaso ɔnnyɛ aber nyina na ɔyɛ mberɛw dɛ yɛnye hɛn nuanom Christianfo benya adwen kor (Hwɛ nkyekyɛmu 11)
11. Ebɛnadze ntsi na ɔtɔ da a, ɔyɛ dzen ma hɛn dɛ yebenya ɔdɔ ama hɛn nuanom?
11 Ɔnnyɛ aber nyina na ɔyɛ mberɛw dɛ yɛbɛda ɔdɔ edzi akyerɛ hɛn nuanom, nkanka aber a yenyim hɔn mberɛwyɛ. Ɔbɛyɛ dɛ nna iyi yɛ asɛndzendzen ma tsetse Christianfo no mu binom. Dɛ nhwɛdo no, obotum aba dɛ nna ɔnnyɛ ɔhaw mma Euodia na Syntyche dɛ ‘wɔnye Paul bɛyɛ edwuma wɔ asɛmpa no mu.’ Naaso biribi ntsi nna ɔyɛ dzen ma hɔn dɛ wɔnye hɔnho bɔbɔ. Dɛm ntsi Paul tuu hɔn fo dɛ “wɔnyɛ adwenkor wɔ Ewuradze mu.”​—Phil. 4:2, 3.
Asafo mu mpanyimfo a hɔn mfe akɔ enyim nye asafo mu mpanyimfo a wɔyɛ mberantsɛ no, wobotum nye hɔnho enya anyɛnkofa no mu yɛ dzen (Hwɛ nkyekyɛmu 12)
12. Yebesi dɛn enya ɔdɔ a no mu yɛ dzen ama hɛn nuanom Christianfo?
12 Yebesi dɛn enya ɔdɔ a no mu yɛ dzen ama hɛn nuanom Christianfo ndɛ? Sɛ yehu hɛn nuanom no yie a, ɔbɛyɛ mberɛw ama hɛn dɛ yɛbɛtse hɔn ase na yeenya ɔdɔ ama hɔn. Ɔnnsɛ dɛ mfe a woedzi anaa beebi a wofi siw hɛn kwan dɛ yɛbɔdɔ hɔn. Kaa dɛ, nna Jonathan enyin kyɛn David bɛyɛ mfe 30, naaso ɔnye no nyaa anyɛnkofa a no mu yɛ dzen. Ana woara so ibotum afa obi a oenyin kyɛn wo anaa ɔwo enyin kyɛn no no nyɛnko? Sɛ eyɛ dɛm a, ibotum ada no edzi dɛ ‘edɔ enuanom nyina.’​—1 Pet. 2:17.
Hwɛ nkyekyɛmu 12 *
13. Ebɛnadze ntsi na bi a yɛnye binom bɔbɔ dzendzenndzen asen afofor wɔ asafo no mu?
13 Ana ɔdɔ a no mu yɛ dzen a yebenya ama hɛn nuanom Christianfo no kyerɛ dɛ ɔsɛ dɛ yɛnye obiara a ɔwɔ asafo no mu no bɔ dzendzenndzen anaa? Oho, ɔnodze orunntum nnyɛ yie dɛm. Ɔnnyɛ mfom ankasa dɛ yɛbɛbɛn binom akyɛn afofor, osiandɛ binom wɔ hɔ a ndzɛmba a hɛn enyi gye ho no hɔn so hɔn enyi gye ho. Jesus frɛɛ n’asomafo no nyinara “nsɛfo,” naaso nna ɔwɔ ɔdɔ soronko ma John. (John 13:23; 15:15; 20:2) Naaso, Jesus annyɛ enyimhwɛ, oemmbu John dɛ ɔsen afofor. Dɛ nhwɛdo no, aber a John na no nua James bisaa Jesus dɛ ɔmma hɔn dzibew tsitsir bi wɔ Nyankopɔn n’Ahendzi no mu no, ɔkãa kyerɛɛ hɔn dɛ: “M’enyimfa nye m’abankum tsena dze, ɔnnyɛ medze dɛ medze bɛma.” (Mark 10:35-40) Tse dɛ Jesus no, ɔnnsɛ dɛ yɛyɛ enyimhwɛ, anaadɛ adze papa biara a, nna yɛdze ama hɛn anyɛnkofo a wɔbɛn hɛn paara no. (Jas. 2:3, 4) Sɛ yɛyɛ dɛm a ɔdze mpaapaamu bɛba Christianfo asafo no mu, biribi a ɔnnsɛ dɛ osi koraa.​—Jude 17-19.
14. Dɛ mbrɛ Philippifo 2:3 kyerɛ no, ebɛnadze na ɔbɔboa hɛn ma yeekwetsir akansi sunsum?
14 Sɛ yɛda ɔdɔ a no mu dzen edzi kyerɛ hɛnho a, yɛbɔbɔ asafo no ho ban efi akansi sunsum ho. Kaa dɛ Jonathan annye David ennsi akan, na ɔannye no ammper ahendzi no ho. Hɛn nyinara botum esũasua Jonathan no nhwɛdo no. Mma w’enyi mmber wo mfɛfo edwumayɛfo osian dza wotum yɛ ntsi, mbom ‘fi ahobrɛadze adwen mu bu wo nyɛnko kyɛn wankasa wo woho.’ (Kenkan Philippifo 2:3.) Ma ɔntsena w’adwen mu dɛ obiara wɔ biribi a obotum ayɛ dze aboa asafo no. Sɛ yɛbrɛ hɛnho adze a, yɛdze hɛn adwen besi suban pa a hɛn nuanom wɔ no do na yebenya hɔn nhwɛdo pa no do mfaso.​—1 Cor. 12:21-25.
15. Ebɛnadze na isũa fi Tanya nye n’ebusua no hɔn asɛm no mu?
15 Sɛ biribi bɔn bi a yɛnnhwɛ kwan to hɛn mpofirmu a, Jehovah nam ɔdɔ a no mu dzen a hɛn nuanom da no edzi nye mboa a wɔdze ma hɛn no do kyekye hɛn werɛ. Hom mma yɛnhwɛ dza ɔtoo ebusua bi a nna wɔakɔ ehyiadzi Memenda apon. Nna ɔyɛ Afe 2019 “Ɔdɔ Mmbɔ Adze Da!” Amanaman Ntamu Ehyiadzi a wɔyɛe wɔ United States no mu kor. Hɛn akyerɛbaa Tanya a ɔwɔ mba baasa no kãa dɛ: “Nna yɛtsena hɛn kaar mu a yɛresan akɔ hotel a yɛda no, dza yehunii ara nye dɛ kaar bi efi beebi a ɔnam no dze abɔbɔ hɛndze no mu. Obiara emmpira dze, naaso nna hɛnho abow hɛn, ntsi yesianee fii kaar no mu kegyinaa kwan no finimfin. Yehun dɛ obi a ogyina kwan n’afã roto nsa frɛ hɛn dɛ yembegyina ne kaar no ho, osiandɛ hɔ ye. Nna ɔyɛ onua bi a no so fi ehyiadzi no ase rebɛsen. Nnyɛ nankotsee na ogyinae. Enuanom beenum bi a wofi Sweden baa ehyiadzi no bi so gyinae. Nkyerɛbaa a wɔwɔ mu no yɛɛ menye me babaa no etuu, nna dza yehia ara nye no! Mekãa kyerɛɛ hɔn dɛ biribiara bɛyɛ yie, ntsi wobotum akɔ, naaso nna wɔmmpɛ dɛ wɔdan hɛn gya hɔ. Aber a ayarsafo bae mpo no, nna wɔda ho ara gyina hɛn nkyɛn, na wɔhwɛe hun dɛ hɛn nsa aka biribiara a yehia no. Wɔ mber a nna no mu yɛ dzen dɛm mu no, yɛtsee nka dɛ Jehovah dɔ hɛn. Dza osii no maa ɔdɔ a yɛwɔ ma hɛn nuanom no mu yɛɛ dzen na ɔmaa ɔdɔ na enyisɔ a yɛwɔ ma Jehovah no so yɛɛ kɛse.” Ekaa ber bi a ekɔr ahokyer mu ma wo nua Christiannyi bi daa ɔdɔ edzi kyerɛɛ wo no?
16. Sɛ yɛda ɔdɔ a no mu yɛ dzen edzi kyerɛ hɛnho a, ebɛn mfaso na yenya?
16 Susu mfaso a yenya aber a yɛda ɔdɔ a no mu yɛ dzen edzi kyerɛ hɛnho no ho. Ɔma yetum kyekye hɛn nuanom a worihyia nsɛndzendzen no werɛ. Yɛhyɛ koryɛ a ɔwɔ Nyankopɔn no nkorɔfo ntamu no mu dzen. Yɛda no edzi dɛ yɛyɛ Jesus n’esuafo ampa na iyi ma nyimpa akomapafo nya ɔpɛ dɛ wɔbɛba abɔsom Jehovah. Dza ɔkyɛn ne nyina no, yɛhyɛ Jehovah a ɔyɛ “ehumbɔbɔr Egya nye awerɛkyekyer nyina Nyankopɔn” no enyimnyam. (2 Cor. 1:3) Ɔmbra dɛ hɛn nyinara yɛbɔkɔ do enya ɔdɔ a no mu yɛ dzen na yaada no edzi akyerɛ hɛnho!
ANA IBOTUM AKAA?
Ebɛn ɔdɔ na yeesusu ho wɔ adzesua yi mu no?
Ɔdɔ a no mu yɛ dzen a Jehovah, nye afei Jonathan na David daa no edzi no, ebɛnadze na yebotum esũa efi mu?
NDWOM 130 Fa Bɔn Kyɛ
^ nky. 5 Jesus kãa dɛ ɔdɔ a n’esuafo no bɛda no edzi akyerɛ hɔnho no na ɔbɛma afofor ehu dɛ wɔyɛ n’esuafo ampa. Hɛn nyina yɛbɔ mbɔdzen dɛ yebodu dɛm ahwehwɛdze no ho. Sɛ yɛdɔ hɛn nuanom Christianfo dɛ mbrɛ yɛdɔ hɛn ebusuafo a wɔbɛn hɛn paara no a, yebotum ahyɛ ɔdɔ a yɛwɔ ma hɔn no mu dzen. Adzesua yi bɔboa hɛn ma yeenya ɔdɔ a ɔtse dɛm, na yaakɔ do ada no edzi akyerɛ hɛn nuanom a yɛnye hɔn wɔ asafo no mu no.
^ nky. 55 MFONYIN NO HO NKYERƐKYERƐMU: Asafo mu panyin bi a ɔyɛ aberantsɛ enya asafo mu panyin bi a ne mfe akɔ enyim no suahu do mfaso. Asafo mu panyin a ɔyɛ aberantsɛ no akɛsera no na ɔdze enyigye rema no akɔaba. Wɔnye hɔn yernom reda ahɔhoyɛ su edzi akyerɛ hɔnho.
Fa mona Fa mona Kɔ Do Da Ɔdɔ A No Mu Yɛ Dzen Edzi
w21 January nkr. 20-25
Yɛ Komm Na Nya Jehovah No Mu Awerɛhyɛmu
Dza Yebotum Esũa Efi “Osuanyi A Jesus Dɔɔ No No” Hɔ
Nguan Fofor No Mu Nyimpadodow Kɛse No Yi Nyankopɔn Nye Christ Ayɛw
ASETSENA MU NSƐM Yebohun Dɛ, Ɔnnsɛ Dɛ Yɛpopo Hɛn Tsir Kyerɛ Jehovah Da
Text Kyerɛ no mu dza epɛ dɛ etwẽ na ekenkan ƆWEƆN-ABAN—DZA ADZESUA NSƐM WƆ MU January 2021
Fa mona Fa mona ƆWEƆN-ABAN—DZA ADZESUA NSƐM WƆ MU January 2021
ƆWEƆN-ABAN—DZA ADZESUA NSƐM WƆ MU January 2021